လဟယ်မြို့အရောက် ကြိုဆိုနေကြသော နာဂတိုင်းရင်းသူများနှင့်
လဟယ်မြို့မှ မိမိကျေးရွာသို့ အသွားလမ်းတနေရာ၌
ဤသို့ အ၀တ်မ၀တ်ပဲ မိမိမရောက်ခင်နေထိုင်ကြသည်
တောင်ယာတောတွင် ဤသို့ ဘိန်းများ စိုက်လို့
မိမိရွာ၌ ဤသို့ စည်းရုံးရေးအဖြစ်ဝန်ထမ်းများလာ၍ ဗွီဒီယိုများပြသ ဆေးဝါးများပေးလျှက်
ဒီလို သူတို့ဝတ်ဆင်ရန် မိမွေးရာများဖုံးလွှမ်းနိုင်စေရန်
တောင်ယာတောတွင် အမှတ်တရ ရောက်ရှိခဲ့သည်
တခါတရံမထင်မှတ်ပဲ ဤသို့ မိုးသားတိမ်လိပ်များဖြင့် မိမိရွာကိုပင်မမြင်ရတော့
သူကတော့ ခန္တီးမြို့နေဘူးသည်မို့ မြန်မာစကားပေါက်တယ်
ခုလို အပူဒဏ်နဲ့ ကြုံနေရပြန်တော့လဲ မိမိသာသနာပြုခဲ့ဘူးတဲ့ နေရာလေးကို ပြန်လည်လွမ်းလျတမ်းတနေမိတယ်ပေါ့။ အမှန်စင်စစ်လူ၏အလို မလိုက်နိုင်ခြင်းသည် ဓမ္မတာပင်မဟုတ်ပါလော။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် အေးရင်လည်း အရမ်းကိုအေးပါ၏။ ပူပြန်ရင်လဲနေစရာမရှိခဲ့။ အေးတုန်းကလဲ အေးလို့ ရေမချိုးနိုင်လို့ အအေးအမြန်ကုန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းခဲ့ဘူး၏။ ယခု ပူပြန်တော့လဲ အအေးကို အလိုရှိခဲ့သည်။ ခက်သည်ကား ဘာမဆို အလိုမကျစရာချည်းမို့။ မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း” ယမ္ပိစ္ဆံ နလဘတိ တမ္ပိ ဒုက္ခံ”လို့ ဟောတော်မူခဲ့ပါ၏။ မှန်၏ ဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်ကြမယ်ဆိုရင် အဘယ်မှာ ဒုက္ခဆိုတာရှိတော့မှာလဲ အကယ်လို့ ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်မယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးမိုဃ်းရွာပါစေလို့ ဆုတောင်းမိမှာသေချာသလောက်။ ယခုအချိန် တောင်ပေါ်ဒေသမိုဃ်းတများရွာသွန်းနေပြီပေါ့။လွမ်းနေမိ၏။ တမ်းတနေမိ၏။ မိမိသင်ခဲ့ဘူးသော စာလေးတွေ ရွတ်ဆိုပြီး တောင်ယာအသွားရွတ်ဆိုနေကြလေမလား လို့ အတွေးတို့ဖြင့် တနေ့ ထိုဒေသသို့( စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခန္တီးခရိုင် လဟယ်မြို့နယ် လခြမ်းကျေးရွာ)သို့ မိမိသွားခဲံစဉ်က။ ၉လ ပိုင်း မိုဃ်းတွင်းကာလမို့ မိုဃ်းက သဲသဲမဲမဲရွာချနေတော့၏။ ခန္တီးမြို့မှ ရဟတ်ယဉ်ထွက်လို့ ရာသီဥတုသည်မကောင်းခဲ့သည်မို့ ကွင်းရောက်မှ ပြန်လည်နောက်ကြောင်းလှည့်ခဲ့ရသည်။ ထေရ၀ါဒဗဟိုဋ္ဌာနချုပ် ပေါမိုင်းကျောင်းသို့ နေ့ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေစဉ်ပဲ ရာသီဥတု ကောင်းသည်မို့ ကြွဘို့ရန်စားလက်စကို ခဏတာရုတ်သိမ်းလို့ ပြန်လည်ချီတတ်ခဲ့ရသည်။ လဟယ်မြို့မှာလည်း ဆွမ်းများကပ်ဘို့ ၀န်ထန်းများစေခိုင်းထားကြောင်းပြောဆိုသံသဲ့သဲ့ကြားမိ၏။ ကဲ သွားတော့မယ်ဆိုတော့လဲ သွားရပေဦးတော့မည်။ ကားပေါ်တတ်ခဲ့သည်။ ရဟတ်ယာဉ်သည် (၆)ယောက်မျှသာဆန့်သည်။ မိမိတို့ အဖွဲ့ ပထမထွက်ခဲ့သည်။ မှတ်မှတ်ရရ (န.မ.ခ တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်လှမြင့်ဆွေ) (ရန်ကုန် န.ပ.သ ညွန်ချုပ်ဦးစန်းလွင်)(ခန္တီးဗျူဟာမှူး လက်သီးမင်းသား မောင်မောင်ဦး) တို့နောက်မှနေရာယူပြီး မိမိတို့သည်ရှေ့မှနေ၍ ဘုရားဆင်းတုတော်များရင်ခွင်ပိုက်လျှက် ရဟတ်ယာဉ်သည် စတင်ထွက်ခဲ့တော့၏ အသံတို့သည် ဆူညံလျှက်။ ရာသီဥတုသည် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားတော့၏။ ပေပေါင်း ၆၀၀၀ အကျော်လောက်မှာ ရာသီဥတုကြောင့် မိုးသားများ နှင်းထုများ ပိတ်လျှက် ရှေ့မှ မောင်းနှင်သော အရာရှိသည် တော်၏ လျှင်၏။ နို့မို့ဆို အနိစ္စသဘောကိစ္စချောမည်။ နောက်ခန်းမှ (န.မ.ခ.)(န.ပ.သ.) ဗျူးဟာမှူးတို့သည်ပင်လျှင အသံကုန်အော်ဟစ်လျှက် အရှင်ဘုရားတို့ ပရိတ်ရွတ်ပါဟူ၏။ ပေါမိုင်းဆရာတော်(ယခုမရှိတော့ဟု သိရ)သည်လည်း ပရိတ်ရွတ်ခဲ့သည် မိမိတို့လည်းမနေသာအဖြေရှာလိုက်သည်။ “ယဿာ နုဘာဝတော ယက္ခာ နေ၀….လို့မှ မဆုံးသေး ရာသီဥတုသည် ပြန်လည်ကောင်းမွန်ခဲ့သည်ပေါ့။ မိနစ်၂၅ မိနစ်လောက် မောင်းပြီးသည်နှင့် တောင်ပေါ်ဒေသ လဟယ်မြို့သို့ ရောက်ရှိတော့၏။ လဟယ်မြို့ဟူ၍ ၀န်ထမ်းအချို့နှင့် နာဂတိုင်းရင်းသူ/သားတို့ အနည်းကျဉ်းနှင့် ကြိုဆိုခဲ့သည်။ မိမိတို့သည် VIP စနစ်နဲ့ သွားလာခွင့်ရရှိခဲ့သည်ဟု နောက်မှသိရ၏။ မိမိတို့အရင် သာသနာပြုများသည် ကိုယ့်အိပ်ကိုလွယ်ပြီး ဒေသအရောက် ခြေလျင်ကြွရသည်ဟုလည်းကြားရသည်။ ခန္တီးနှင့် လဟယ်သည် ရဟတ်ယာဉ် မိနစ်၂၅ သာစီးရသော်လည်း ခြေလျင်ခရီးသည် ၃ ည အိပ် ၄ ရက် ခြေလျင် လျှောက်ရ၏။( ကိုယ်တွေ့) မိမိခန္တီးမြို့ကထိန်ကြွစဉ် ၃ ည အိပ် ၄ ရက်ကြာဆင်းခဲ့ရသည်။ ဒီလိုနှင့် လဟယ်မြို့သို့ရောက်ရှိပြန်သော်လည်း အချိန်ကားနှောင်းခဲ့ပြီမို့ ဆွမ်းကိစ္စ ဥပုသ်စောင့်လိုက်ရသည်။ တောင်တန်းဒေသသာသနာပြုစတင်ခြင်းသည် နေ့ဆွမ်းတနပ်လွတ်ခြင်းနဲ့စတင် ခဲ့ရ၏။ လဟယ်မြို့မှာ ထေရ၀ါဒဗဟိုဋ္ဌာနချုပ်ဆရာတော် မှ သာသနာပြုသည်ဆိုသည်မှာ သီးခံဘို့ အရှင်ဘုရားတို့ သွားမဲ့နေရာသည် အ၀တ်မ၀တ်သောနာဂလူမျိုးတို့ဖြစ်ကြောင်းသြ၀ါဒပေးခဲ့သည်။ ဒီတော့မှ မိမိသည် မိမိနဖူးအားလက်ဖြင့်ရိုက်လျှက် “သေဟဲ့ နန္ဒိယ”ဆိုပြီး အာမေဋိတ်သုံးမိလိုက်သည်။ လဟယ်မြို့မှာ တညတာ ကျိမ်းပြီးသည်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တနေကုန်လျှောက် ရောက်သည်ဟူသော မိမိသာသနာပြုဋ္ဌာန လခြမ်းရွာသို့ မနက်ချီတတ်ရမည် တဲ့။ အတွေးတို့သည် ယောက်ယက်ခတ်လျှက်နေသည်။ မနက်မိုးလင်းသည် မိုးဃ်းလဲရွာနေသည်။ မိမိရွာသွားဘို့ ပလိုင်းကိုယ်စီလွယ်လျှက် လန်ကွတ်တီများဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်မှာပေပွနေသောလူကြီးများနှင့် မေးနှင့် နဖူးတည့်တည့်မှာ ဆေးမှင်ကြောင်များထိုးပြီး စောင့်နေရှာသော နာဂမိန်းမပျို မိန်းမအိုကြီးများတွေ့လိုက်ရသည်။ အ၀တ်မပါကြတော့ အမြင်တမျိုးဖြစ်နေမည်။ မိမိရွာ၌ ခ.မ.ရ ၅၂ တပ်ရင်းရှိသည်တဲ့။ ထို တပ်ရင်းနှင့် မိမိနှင့်အတူ လက်တွဲကာ သာသနာပြုရမည့် ခန္တီးမြို့ ခ.မ.ရ ၃၄၇ တပ်နှင့် ချိန်းမည်ဟူ၏။ မိမိတို့ပါလာသောအထုပ်များ စစ်တပ်အသုံးအဆောင် လက်နက်ခဲယမ်းများ ဂျီသရီး ဂျီဖိုးလွယ်လျှက် အသင့်ပြင်နေသော စစ်သားများလည်းတွေ့လျှက် မိမိသည် မိုဃ်းရွာနေသည်မို့ မသွားသေးဟု ထင်နေမိသည်။ မကြာခင် မိမိတို့အဖွဲ့ မိုဃ်းရွာထဲ ကြမ်းတမ်းသော ခရောင်းတောလမ်းကို လျှောက်ရတော့မည်။ မိုဃ်းသည်လည်း သဲကြီးမဲကြီးရွာလျှက်၇ှိသည်မို့ တောင်ပေါ်ဒေသမို့ ဂရုတစိုက်တတ်ရပေမည်။ မတော်လို့ချောလဲလို့ကတော့ တောင်အောက်သို့ ကျနိုင်သည်။ နာဂလူမျိုးတို့သည်။ ပါးစပ်မှ ဟာကျူလာ.ဟာကျူလာ ဟေဟိ။ စသည်တို့ ပါးစပ်မှ ဆိုလျှက် မိမိမှာတော့ ငိုချင်နေမိသည်။ မြေပြန့်သွားနေကြသူသည် တောင်ပေါ်သို့ မည်မျှကြာအောင်တတ်နိုင်ပါမည်လဲ။ တတ်ခဲ့ရပြန်သည် ဆင်းခဲ့ရပြန်သည်မို့ ခြေတောက်မှ မထောက်နိုင်တော့ မိုဃ်းသည်လည်းသဲသဲမဲမဲရွာချနေလျှက်ရှိသည်။ ပါလာသောခါးပန်းကြိုးလေးကို ဒူးအောက်မှာ စီးကာလျှောက်ခဲ့ပြန်၏။ခဏတော့ရ၏။ ၁၀ မိနစ်ခန့်လျှောက် တခါနားခဲ့သည်။ ခြေတောက်မှာလည်းသွေးတို့ဖြင့်နီမြန်းလျှက် ကိုရွှေတွတ်တို့ကလဲ မျက်နှာသာမပေးခဲ့။ တွယ်သည် ခွာလို့လဲမရ။ အနီးနေစစ်သားတယောက်မှ ဆားလေးနဲ့ ထိတွေ့ပေးလိုက်သည်။ ဒီတော့မှ ကွာကြခဲ့သည်။ မိမိနှင့် တူတူလာခဲ့သော အရှင်စန္ဒိမာ ဆိုတော့ ဦးဇင်းမှာတော့ မိမိထက်အသက်ကြီးသည်မို့ ဆက်မလျှောက်နိုင်တော့သည်မို့ နာဂလူမျိုးတို့ စောင်နဲ့ထမ်းကာ သယ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။ မိမိမှာတော့ ဟန်မပျက် လျှောက်နေရသည်။ ရွာတရွာတော့ မြင်နေရပြီ တောင်ထိပ်တနေရာမှာ မိမိရွာထင်နေမိသည်။ လား လား.မဟုတ်သေးဘူးဟူ၏။ ဝေထိုက်ရွာတဲ့…အဲဒိမှာ ဆွမ်းဘုဉ်းပေးမယ်တဲ့ ပြီးတာနဲ့ အ၇ှင်ဘုရားရွာကို ဒီည အရောက်သွားရမှာဘုရားတဲ့…။တွေ့ပြန်တော့လဲ မိမိရွာမဟုတ်သေးဆိုတော့လဲ အားလျှော့ချင်လာ၏။ သို့သော်.”.ဗုဒ္ဒသာသန ဘာရော အ၀ဿံ ၀ဟိတဗ္ဗော”။ပြန်လည်လို့ အားတင်းခဲ့မိ၏။ မကြာခင် ဝေထိုက်ရွာသို့ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဆွမ်းကိုကြက်သားနှင့် ဘူးသီးရောချက်ထားသည်။ ပဲဟင်းကတခွက် ချီးများမနေနိုင် ဗိုက်ဆာနေသည် ဘုဉ်းလိုက်မိသည် စပါးလုံးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ပေါ့။ ဘေးဘီကြည့်ပြန်တော့ ကိုယ်တုံးလုံးချည်းတွေနဲ့မိမိတို့အားဝိုင်းကြည့်နေကြသော နာဂလူမျိုးများ ကြက်သီိးမွှေးညင်းများတောင်ထမိတော့၏။ ပြီးတာနဲ့ ကုလားမခြင်းဆွဲနို့ဆီနှင့် ဖျော်ထားသော တပ်လဘက်ရည် အချိုခြောက်သည်နှပ်ထားတာကြာပြီမို့လားမသိ အတော်ခံတွင်းတွေ့မိ၏။ ဟန်ဆောင်မနေနိုင်ခဲ့ ခွက်အစိမ်းနဲ့ အပြည့်ဖျော်ထားသော လဘက်ရည် အကုန်သောက်မိ၏။ အင်း ခက်တာက သင်္ကန်းတွေကအစိုကြီး။ ဆက်လျှောက်ရဦးမည်တဲ့။ လျှောက်စမ်းဟ လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မှာပဲလို့ ဆိုပြီး ခဏတာ နားခွင့်ရသည် ပင်ပန်းသည်မို့ ဦးခေါင်းချလိုက်သည်နှင့် အိပ်ပျော်သွားတော့၏။ ထိုရွာ၌ မိမိသူငယ်ချင်း ၂ ပါးကျန်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ဆက်လျှောက်ရဦးမည်။ လမ်းခရီးမှာကြမ်းသထက်ကြမ်းလာသလို မိုဃ်းသည်လည်း ရွာသထက် အညိုးကြီးနဲ့ရွာချနေတော့၏။ စားကောင်းကောင်းနဲ့စားလာခဲ့သမျှ ဒုက္ခတွေ့ပြီ လမ်းကိုပင် သိပ်မလျှောက်နိုင်ခဲ့။ နေသည်ဝင်စပြုနေပြီ။ တနေရာမှ ကျားဟတိန်းသံလိုလို တချက်ကြားလိုက်မိသည်။ ဆတ်အော်သံ မျောက်အော်သံ ချေ အော်သံတို့သည် တယောက်ထည်းဆိုလျှင် စိတ်ချောက်ချားစရာဖြစ်၏။ သို့သော် မိမိတို့အဖွဲ့သည် အတော်များ၏။ မကြောက်ရေးချ မကြောက် သို့သော် အနည်းကျဉ်းတော့ကျောချမ်းမိသား။ လျှောက်သည် တတ်သည် ဆင်းသည် တောင်ပေါ်ဒေသဆိုသည့်အတိုင်း အဆင်းအတတ်ပေါများလှသည် တောင်ကို ကွေ့ကာ ပတ်ကာ သွားနေရသည်။ တောင်ထိပ်တနေရာအရောက် မီးများ မထိန်ပေမဲ့ မှန်တုတ်တုတ်နှင့်တွေ့နေရသည်မို့ ငါ့ရွာတော့ ရောက်တော့မှာပဲဟု ပျော်ရွှင်နေမိ၏။ သို့သော် နေ့ခရီး ညမီးတဲ့ မနီးသေး အတော်သွားရဦးမည်တဲ့ အနားမှ စစ်သားတယောက်ရဲ့ အားပေးစကား။မိုးသည်ချုပ်စပြုနေ၏။ အောက်ကိုပင် မကြည့်အားတော့ ရှေ့သို့ရောက်ချင်ဇောနဲ့ လျှောက်နေမိသည်။စစ်သားတယောက်မှ ပါလာသောဓါတ်မီးဖြင့် မိမိခြေအား ထိုးကြည့်လိုက်စဉ် တွတ် ၃.၄ ကောင် သွေးများဝလို့ မိမိ၏ခြေမှာလည်းသွေးတို့ဖြင့်နီမြန်းလျှက်ရှိသည်။ မထူးတော့ပြီ။ သွေးလှူရသည်ပေါ့ဆိုပြီး ဆက်လျှောက်ခဲ့သည် မနေနိုင်တော့ ယားလာ၏။ သည်တော့မှ မောင်စစ်သားရေ လုပ်ပါဦးဆိုမှ ဆားလေးနဲ့တို့ချလိုက်၏။ သွေးများသည် မြင်မကောင်းနီမြန်းလျှက်ရှိ၏။ ဆက်လျှောက်သည် အရှင်စန္ဒိမာကတော့ ဝေါနဲ့ကြွနေရတော့ ပျော်နေရှာမည်။ ဝေါဆိုသည်မှာ စောင်ဖြင့်ထိပ်မှကြိုးဖြင့်ချီပြီး နာဂ၂ ယောက်ထမ်းသည်ဟူ၏။ မီးရောင်သည် နီးသထက်နီးလာပြီ လူသံအချို့ကြားလာရ၏။ ရှေ့မှ စစ်သားတယောက်၏ အော်သံကြားလိုက်ရသည် ရောက်ပြီဗျိုး…တဲ့။ ဒီတော့မှ သက်ပြင်းရှည်ကြီးတချက်ချမိတော့၏။ ဟင်းးးးးးးး။ ခ.မ.ရ ၅၂ တပ်ကြပ်ကြီး အုန်းကြိုင်သည် ကြိုဆိုလျှက် ပင်ပန်းလာလားဘုရားတဲ့ မေးရက်လေချင်း။ ကျောင်းပေါ်တတ်ခဲ့သည်။ ဂျိုးဂျောင်း ဂျိုးဂျောင်း ကျောင်းပေါ်တတ်စဉ်ကြားလိုက်ရသည့်အသံ။ သံတချောင်းမှမကုန်(မရှိလို့) တောထမ်းများဖြင့်မိုးထား၏။ ၀ါးများကိုခွဲပြီး ကာထား၏။ ခင်းထား၏။ မနေ့ကပဲ ပြီးသည်ဟူ၏။ ရောက်သည်နှင့် လာပြန်ပြီ ကုလာမခြင်းဆွဲနို့ဆီမိုက်ခွက်အကြီးသားဖြင့်ဖျော်လျှက် လာကပ်သည်။ နောက်ပြီး ပဲကို နို့ဆီဖြင့် ရောသမမွှေကာကြော်ထားသော ပုဂံတချက်။ ရေနွေးခရားတအိုး။ ပင်ပန်းသည့်ဒဏ်ကြောင့် မိမိအပါဝင် သာသနာပြု (၈)ပါး ဘုဉ်းလိုက်ကြသည်။ ခဏနေ အိပ်လိုက်ကြသည် ။ မိမိကတော့ မိမိရွာရောက်သည်မို့ နေခဲ့ရတော့မည်မို့ပျော်နေမိသည်။ ကျန်သည့် ၆ ပါးအဖွဲ့အပါဝင် ပြန်လည်ချီတတ်သွားကြတော့၏။ မိမိမှာတော့ ကျောင်းမမည်သော ကျောင်းလေးပေဓမှနေပြီး မိမိကျောင်းအောက်တွင်၇ှိသော ရွာထဲကို လှမ်းကြည့်မိသည် ထူးမခြားနား အ၀တ်မပါကိုယ်ထီးတွေပါပဲလား..ဟု တွေးရင်း ပရိတ်ရွတ်နေမိသည်။ မိမိရွာ၏ ဘယ်ဘက်တောင်ထိပ်သည် သူပုန်ရွာဖြစ်၏။ မိမိရွာသည် သူပုန်ရွာနှင့်နီးခြင်းကြောင့် ဗိုလ်ကြီးတယောက် အပါဝင် ၁၅ ယောက်ခန့်။ ဆေးတပ်သားသည် မိမိနှင့် ဗိုလ်ကြီးအတွက်ဖြစ်၏ ဟု ပြောပြမှသိရတော့၏။ ခဏနေပြီး စစ်ပုဂံ စစ်မိုက်ခွက် စစ်အသုံးဆောင်များဖြင့်ထည့်ကာ ပဲဟင်း ကြက်ဥကြော် ဆတ်သားဟင်းတဲ့…လာကပ်သည်။ ဒီတကြိမ်မှာလည်း ဘုဉ်းပေးလိုက်သည် ၃ ပုဂံ စပါးလုံးပေါင်းမြောက်များစွာနှင့်အတူပေါ့။ ကျောင်းနေရာသည် ရွာနှင့် စစ်တပ်အလည်တွင်၇ှိသည်။ အောက်မှရွာ အထက်က စစ်တပ် ရှိသည်။ ဘယ်ကြည့်ကြည့် လွမ်းစရာတောင်တန်းများဝိုင်းရံလျှက်ရှိသည်။ ဟိုဘက်သူပုန်ရွာမှာတော့ မီးခိုးတလူလူနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေပါလိမ့်ဟု…တွေးနေမိသည်မှ တပါး သူတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲ ကိုယ်မသိ မိမိသိသည်မှာကား မနက်ဖြန်က စပြီး မလိမ်မာသေးတဲ့အသိတရားခေါင်းပါးနေကြတဲ့ နာဂလူမျိုးများကို အ၀တ်များဝေငှကာ သာသနာပြုခရီးစဉ် စရတော့မည်မို့…. မနက်ဖြန်ဆိုသည့် အချိန်ကိုကား….။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 11:15 AM